ခရီးသွား၏အနာဂတ် | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ခရီးသွား၏အနာဂတ်
အားဖြင့် Ilan Kaps
စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ, ရထားခရီးသွားခြင်း, ဥရောပခရီးသွား
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 19/09/2020)
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, ပုံစံတိုင်း၌, မည်သည့်နိုင်ငံနှင့်၎င်း၏စီးပွားရေး၏ကျောရိုးဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာသာလမ်းများမှတဆင့်ဖြစ်ခဲ့သည်, လက်ရန်းတန်း, ပြီးတော့ငါတို့ကမ္ဘာကြီးကိုအမှန်တကယ်ဖြစ်တာထက်အများကြီးသေးငယ်လာတဲ့နည်းနဲ့ဆက်သွယ်နိုင်ခဲ့တယ်. ထို့ကြောင့်, ကမ္ဘာတဝှမ်းကအဓိကစက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည်တက်ကြွစွာလုပ်ဆောင်ခြင်းတစ်ခုဖြစ်သည်, အဆက်မပြတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်၏တိုးတက်မှုများအတွက်ပြောင်းလဲနေတဲ့.
ခရီးသွားလာရေးနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွင်လတ်တလောခေတ်ရေစီးကြောင်းသည် ပိုမို၍ စိမ်းလန်းသောရွေးချယ်စရာများဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်. ကျွန်ုပ်တို့၏ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုကယ်တင်ရန်လိုအပ်သည့်ပြောင်းရွှေ့မှု, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအသစ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအရှင်ပြီးသားဒီနိယာမအပေါ်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသည်. သို့သျောလညျး, ဤတိုးတက်မှုများသည်လွန်ခဲ့သောရာစုနှစ်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့ခရီးသွားနေသည့်နယ်နိမိတ်များကိုချိုးဖောက်နေသည်. ဒါကိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်, သူတို့သည်ငါတို့ကိုပိုမိုမြန်ဆန်သောခရီးသွားလာရေး၏အနာဂတ်သို့ပို့ဆောင်နေကြသည်, ဘေးကင်း, နှင့်စာသားဤလောကထဲက.
ဤဆောင်းပါးသည်ရထားခရီးသွားအကြောင်းကိုပညာပေးရေးသားခဲ့ခြင်းနှင့်ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထားအားဖြင့်ဖန်ဆင်းခဲ့သည်, ကမ်ဘာပျေါမှာစျေးအချိုဆုံးရထားလက်မှတ်တွေဝက်ဘ်ဆိုက်.
အာကာသသည်လူသားတို့၏နောက်ဆုံးနယ်နိမိတ်ဖြစ်သည်. သို့သျောလညျး, ကျနော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်လကအပေါ်ခြေလျင်တိုးမြှင်ကတည်းက, အများပြည်သူစိတ်လှုပ်ရှားဖို့သိသိသာသာဘာမှရှိသေး၏. အခုတော့, လူတွေကိုအာကာသထဲခေါ်ဆောင်သွားဖို့ဆက်ပြီးပြေးနေတယ်, အပန်းဖြေဘို့. အာကာသခရီးသွားလုပ်ငန်းသည်နောက်ကြီးမားသောအရာဖြစ်သည်, ထိုသို့စျေးကြီးခြင်းနှင့်သီးသန့်ဖြစ်လိမ့်မယ်နေစဉ်, ကအနာဂတ်ဆီသို့ ဦး တည်ကြီးမားတဲ့ခြေလှမ်းပါပဲ, အရာအားလုံးဖြစ်နိုင်ခြေအတွက်ပါလိမ့်မယ် အင်္ဂါဂြိုဟ်ကိုလိုနီပြုသည် ရာပေါင်းများစွာသောသူများအတူတကွနေထိုင်နိုင်သောနေရာထိုင်ခင်းအာကာသစခန်းများတည်ဆောက်ခြင်း. သို့သျောလညျး, သိပ္ပံပညာရှင်များလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်အတွက်ခြေလှမ်းကိုယူကြပြီစေခြင်းငှါနေစဉ်, သိသာထင်ရှားသောတိုးတက်မှုများမပေါ်လာမီကျွန်ုပ်တို့မျိုးဆက်အနည်းငယ်စောင့်ဆိုင်းရန်လိုနိုင်သည်.
မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမဆိုအနာဂတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစိတ်ကူးအကြောင်းကိုမေးပါ, သူတို့ကမောင်းသူမဲ့ကားတွေအကြောင်းပြောဖို့ပိုများပါတယ်. ဒီနိယာမကိုအခြေခံတဲ့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရထားတွေရှိပြီးသား. ထို့အပြင်, အချိန်အရှည်ဆုံးသည်, သိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်များသည်လမ်းများပိုမိုလုံခြုံမှုရှိစေရန်နည်းပညာကိုကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်သို့ထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်လုပ်ဆောင်နေကြသည် ကားမောင်းအတွေ့အကြုံ. မောင်းသူမဲ့ကားများကိုစောင့်ကြည့်ရကျိုးနပ်စေသည့်အရာမှာ၎င်းသည်စက်မှုလုပ်ငန်းကိုနည်းလမ်းများစွာဖြင့်လုံးဝပြောင်းလဲစေလိမ့်မည်. ပိုပြီးဖြစ်ခြင်းမှ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတ ယာဉ်အန္တရာယ်၊, လူများသည်နာရီပေါင်းများစွာမောင်းနှင်ရန်မလိုဘဲအကွာအဝေးများကိုပိုမိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်လိမ့်မည်.
အသက်အကြီးဆုံးတစ်ခု အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ပုံစံများ လှည့်ပတ်, ရထားများဟာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အနာဂတ်မှာနေရာတကာမှာရှိနေသေးသည်. အံ့သြစရာ, ဖြစ်ကောင်းအရင်ကထက်ပိုမို. ရထားလမ်းစနစ်များပိုမိုလုံခြုံစေရန်နည်းပညာအသစ်များဖန်တီးထားသော်လည်း, မြန်မြန်, နှင့်ပိုပြီးအဆင်ပြေ, ထိုကဲ့သို့သောစနစ်အတွက်အခြေခံလိုအပ်ချက်မျှတစွာတိုးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်. မီးရထားသည်လူမှုရေးညီမျှမှု၏အရာဖြစ်သည်။ ချမ်းသာကြွယ်ဝသူများသည်မကြာခဏအဆင်းရဲဆုံးအလုပ်သမားများနှင့်အတူစီးနင်းလေ့ရှိသော်လည်းကမ္ဘာ့လူ ဦး ရေလျင်မြန်စွာမြင့်တက်လာခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။, အထူးသဖြင့်စက်မှုနိုင်ငံများတွင်, ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုကိုတိုက်ဖျက်ရာတွင်ထိရောက်သောနှင့်တတ်နိုင်သောရထားစနစ်များသည်အလွန်အရေးကြီးသည်. ရထားများသန့်ရှင်းသောစွမ်းအင်ကိုထိထိရောက်ရောက်လည်ပတ်နိုင်မည်ဖြစ်သော်လည်းတစ်ချိန်တည်းတွင်မရေမတွက်နိုင်သောသဘာဝဓာတ်ငွေ့သုံးယာဉ်များကိုလမ်းပေါ်မှမောင်းထုတ်ခြင်းနှင့်၎င်းသည်ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်အဓိကသက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မည်။ ကမ္ဘာမြေ CO2 ထုတ်လွှတ်မှုလျှော့ချ.
Hyperloop ကို“ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ပထမ ဦး ဆုံးအဓိကနည်းလမ်းအသစ်” အဖြစ်ဖော်ပြထားသည် 100 နှစ်ပေါင်း။ " ၎င်းတွင်ပြွန်အတွင်းရှိအသံထက်မြန်သောအမြန်နှုန်းဖြင့်ခရီးသွားခြင်းလည်းပါဝင်သည်, တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဦး တည်ရာတစ်ခုချိတ်ဆက်. Hyperloop ကိုကုန်တင်နှင့်လူများကိုပါသယ်ဆောင်ရန်အသုံးပြုနိုင်သည်. သို့သျောလညျး, ထူးဆန်းသော Elon Musk သည်ဤနည်းပညာ၏ရှေ့တန်းမှပါသော်လည်း, တချို့နိုင်ငံတွေမှာရှိပါတယ် Hyperloop အကြောင်းကိုသံသယ တကယ်ပိုက်ဆံရင်းနှီးမြှုပ်နှံရကျိုးနပ်ပါက. မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပုံစံသစ်ကို ဖြတ်၍ ခရီးသွားခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ထားသည်ထက်အဖြစ်မှန်နှင့်ပိုမိုနီးကပ်သည်, မကြာမီကယ်လီဖိုးနီးယားနှင့်ဖြစ်နိုင်သည်ဥရောပ၌စမ်းသပ်ပြီးနှင့်ပြွန်၏ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အတူ.
Rotterdam မှ Hamburg လက်မှတ်များ
ဒီတစ်ခုကလက်ဆွဲကုလားထိုင်ခရီးသွားများအတွက်အထူးဖြစ်သည်, နေရာအသစ်များသို့လည်ပတ်ရခြင်းကိုနှစ်သက်သော်လည်းသူတို့၏နေအိမ်များသက်သောင့်သက်သာဖြင့်ပြုလုပ်လိုကြသည်. VR ပြီးသားစီးပွားဖြစ်သွားပြီနေစဉ်, မကြာမီအလုံအလောက်, ကျနော်တို့ VR အကြားတစ်ခုပေါင်းစည်းမှုမြင်လိမ့်မည်, IR, နှင့် AR, တတ်နိုင်သမျှအစစ်အမှန်ဘဝနှင့်နီးစပ်သောအတွေ့အကြုံတစ်ခုကို ဦး ဆောင်နေသည်. ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ်ခုနစ်ပါးသို့သွားခြင်းမှသည် Great Barrier Reef သို့ရေငုပ်သည်, ဒီနည်းပညာအသစ်ကလူတွေကိုကမ္ဘာကိုတစ်ခါမှမမြင်ဖူးအောင်ကူညီလိမ့်မယ်.
Florence to Rome လက်မှတ်တွေ
အကောင်းဆုံးရရှိနိုင်သောလက်မှတ်ရွေးချယ်မှုများကိုသင်ရှာဖွေနိုင်ရန်ကူညီပေးပါမည်. သင့်ရထားလက်မှတ်နဲ့အတူပါ တစ်ဦးကရထား Save!
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “ခရီးသွား၏အနာဂတ်” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သငျသညျဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. တစ်ဦးနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည် ဤ blog post မှ link ကို. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ffuture-of-travel%2F%3Flang%3Dmy ‎- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
အောက်ပါလင့်ခ်များတွင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, <- ဒီ link ကိုစာမျက်နှာများတွင်လေယာဉ်ဆင်းသက်အင်္ဂလိပ်လမ်းကြောင်းများအဘို့ဖြစ်၏, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, pl ကို fr သို့မဟုတ် nl သို့သင်ရွေးချယ်သောအခြားဘာသာစကားများနှင့်အစားထိုးနိုင်သည်.
အနာဂတ် အာကာသခရီးသွား TrainSystems ရထားခရီးသွား Traveland သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
ငါဘဏ္financeာရေးအကြောင်းကိုရေးသားခဲ့ကြပြီ, ယခုအခါရှစ်နှစ်ကြာစာနယ်ဇင်းအမျိုးမျိုးအတွက်ခရီးသွားခြင်းနှင့်နည်းပညာများရှိခဲ့သော်လည်း၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ကလေးဘ ၀ သို့ပြန်သွားသည်. ငါအကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးကိုချစ်ပေမယ့်ဘဏ္noneာရေး၏သန့်ရှင်းသောသုံးပြီးထက်ပို။ အဘယ်သူမျှမ,ခရီးသွားနှင့်နည်းပညာ - သငျသညျဒီမှာနှိပ်ပါနိုင်ပါတယ် ငါ့ကိုဆက်သွယ်ပါ
ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ရထားခရီးသွားဘယ်လ်ဂျီယံ, ရထားခရီးသွားဒိန်းမတ်, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထားခရီးသွားအဆိုပါနယ်သာလန်, ဥရောပခရီးသွား
7 ဥရောပတွင်အကောင်းဆုံး Glamping နေရာများ